प्रहरीलाई ‘घूस’ दिन खोज्ने दुई चालक पक्राउ – Indepth.com.np
प्रहरीलाई ‘घूस’ दिन खोज्ने दुई चालक पक्राउ
भक्तपुर । सडक जाँचमा खटिएका प्रहरीलाई चेकजाँच छल्न पैसा (घूस) दिने दुई चालकलाई भक्तपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नपा १० घर भई हाल काठमाडौंको काडाघारी बस्ने २८ वर्षीय मन्दिर माझी र धनुषाको ढल्केबर नपा ६ बस्ने २५ वर्षीय प्रेम बिकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सडक जाँचका क्रममा माझीले रुट परमिटको कागजातभित्र लुकाई एक हजार एक सय ५० रुपैयाँ प्रहरीलाई दिएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार माझीले गएको आइतबार जिल्लाको मध्यपुर थिमी नपा २ सानोठिमी मनोहरा स्थितमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानोठिमी भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीलाई उक्त रकम दिएका थिए ।
‘प्रहरी टोलीले उक्त सडकमा सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने क्रममा सानोठिमीबाट पेप्सीकोलातर्फ जाँदै गरेको बा २ ख ७२७१ नम्बरको मिनी टिपरका चालक माझीले उनको गाडी लाई चेकजाँच गर्दा रुट परमिटको कागजातभित्र लुकाएर प्रहरीलाई पैसा दिएका थिए’, प्रवक्ता प्रनाउ पोखरेलले भने, ‘हामीले सवारीसाधन र चालक माझीलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं ।’
त्यस्तै बुधबार सोही ठाउँमा खटिएको प्रहरी टोलीलाई सवारी साधन चेकजाँच गर्ने क्रममा ब्लुबुकभित्र एकसय रुपैयाँ लुकाई दिने अर्का चालक बिक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका हुन् ।
ना ५ ख ७५८६ नम्बरको ट्रक चलाएर काठमाडांैबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेका बिकले चेकजाँच छल्न प्रहरीलाई एकसय रुपैयाँ दिएका थिए ।
प्रहरीले बिक र सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दुवैजनालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
एसईईमा चार जीपीए ल्याउने रोजालाई १ लाख पुरस्कार
हनुमन्तेमा बाढी : एक घाइते
ङातापोलको ३१७ औं भुसाराङ्ग
टिपरको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
घाटी रेटी महिलाको हत्या : एक पक्राउ
एसईई परीक्षा २०७५ मा चार जीपीए ल्याउने रोजा श्रेष्ठलाई विनायक शिक्षा निकेतन स्कुलको तर्फबाट एकलाख एकसय एक रुपैयाँले पुरस्कृत गरिँदै । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित विनायक शिक्षा निकेतन इङ्गलिस स्कुलले २०७५ सालको माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (एसईई) चार जीपीए ल्याउने आफ्नो एक विद्यार्थीलाई एक लाख एक सय एक रूपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी रोजा श्रेष्ठलाई उक्त राशिको नगदसहितले सम्मान गरेको हो ।
एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको सम्मान कार्यक्रममा श्रेष्ठलाई उक्त नगदसहित सम्मान गर्दै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भक्तपुर जिल्ला शैक्षिक हबको रूपमा विकास भइरहेको बताए ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न अब काठमाडौं धाउन नपर्ने स्थिति आइसकेको बताउँदै उनले भक्तपुरमै उत्कृष्ट कलेजहरू स्थापना भैसकेको स्पष्ट पारे ।
विद्यालयको प्रिन्सिपल सुरेन्द्रविक्रम प्रजापतिले विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा बढी रुचि दिलाउन र पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न विनायक शिक्षाले केही वर्षअघि नै उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई एक लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको जानकारी दिए ।
उनले एसईईमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले पारिवारिक स्थिति र आफ्नो क्षमताअनुसार उच्च शिक्षामा विषय छनोट गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा विद्यालयबाट २७ ए प्लस, ४२ जना ए, ५ जना बी प्लस, २ जना बी र एक जना सी प्लस गरी उत्तीर्ण ७७ जना विद्यार्थीहरूलाई समेत विशेष सम्मान गरिएको थियो ।
सम्मान कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले विभिन्न साँस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।
भक्तपुर हनुमन्ते बाढी) भक्तपुरको मुख्य खोला हनुमन्तेमा आएको बाढी । फोटो : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । हनुमन्ते खोलामा आएको बढीले बगाएका ३२ वर्षीय सन्तोष पहरीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । काभ्रेको कोशीपारि घर भई हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका २ बालकोट बस्दै आएका पहरी शुक्रबार हनुमन्ते खोलामा खसेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार बाढी आएको हनुमन्ते खोला किनार हुँदै हिँडिरहेका पहरी खोलामा खसेका हुन् । खोला खसेर बगाएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्कालै महानगरीय प्रहरी प्रभाग बालकोटबाट प्रहरी टोली खटिएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रहरी टोलीले स्थानीयको सहयोगमा पहरीको उद्धार गरेर उपचारको लागि मध्यपुर थिमी नपाको गट्ठाघरस्थित नागरिक अस्पताल पठाएको उनले बताए । उनका अनुसार हनुमन्ते खोलाले बगाएर घाइते भएका पहरीको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
दधिकोट र नयाँ ठिमी जोड्ने पुल जोखिममा
हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नयाँ ठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ दधिकोट जोड्ने एक पुल जोखिममा परेको छ । बाढीले पुलभन्दा बाहिर कटान गरेको हो ।
उक्त पुलसँगै नयाँ पुल बन्दै गरेको छ । नयाँ पुल बनाउन खन्ने क्रममा सूर्यविनायक नपातिर भाँसिएर केही महिना आवातजावत प्रभावित भएको उक्त बाटोको अहिले मध्यपुर थिमि नपातिर हनुमन्ते खोलाले कटान गरेको हो ।
हनुमन्ते खोलामा आएकोले कटान गरेर पुललाई खतरा पारेपछि मध्यपुर थिमी नपाले उक्त कटान रोक्ने कार्य अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै बिहीबारदेखि आएको अविरल वर्षाले सूर्यविनायक नगरपालिका ७ गुण्डुमा एक घरमा क्षति पुगेको छ । भक्तपुर प्रहरीका अनुसार वर्षाले आएको पहिरोले घरलाई हानेको हो । उक्त पहिरोले घरलाई सामान्य क्षति पु¥याएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
हनुमन्ते खोलामा सतह बढ्यो
बिहीबार रातीदेखि आएको अविरल वर्षाले हनुमन्ते खोलामा पानीको सतह बढेको छ । अहिलेसम्म हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी बस्तीमा नपसेको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ । तर वर्षा हुने क्रम नरोकिएकाले बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले डुबानमा पर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको बताए ।
यसवर्ष हनुमन्ते कोरिडोर निर्माण कार्य सँगसँगै खोला फराकिलो भएकाले गत वर्ष जस्तो डुबानको समस्या नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
खोला फराकिलो भए पनि खोला उकासिएकाले भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका हनुमन्ते खोला दायाँबायाँ रहेका विभिन्न घाटहरु भने डुबानमा परेका छन् । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले हनुमानघाट, चुपीँघाट, राममन्दिर, मंगलतीर्थ घाट डुबाएका छन् । यी क्षेत्र बढ्दो पानीको वहाबले जलमग्न भएका छन् । हनुमन्तेमा आएको बाढीले ब्रह्मायणी, जगाती, माहेश्वरी, हनुमानघाट, चुपीँघाट, राममन्दिर र मंगलतीर्थ घाटमा रहेका पुल छोएका छन् । जसले गर्दा मंगलतीर्थ घाटस्थित बाराहीस्थान जाने बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ । यो बाटो प्रत्येक वर्षको वर्षामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बाराहीस्थान जाने पुलमा हनुमन्ते भेल नअटेर वर्सेनि मंगलघाट हुँदै धानखेतमा पसेको छ । जसले गर्दा धानखेत डुबानमा परेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै क्षति भएको जानकारी प्राप्त नभएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ ।
भक्तपुर नपा ५ टौमढीस्थित ङातापोल मन्दिरमा झण्डोत्तोलन गर्दै साहसी अवालहरु । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । नेपालकै सबैभन्दा अग्लो प्यागोडा शैलीको भक्तपुर टौमढी क्षेत्रस्थित ङातापोल (पाँचतले) मन्दिरको उमेर तीनसय १७ पुगेको छ । मन्दिर निर्माण गरेको तीनसय १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार मन्दिरमा वर्ष बन्धन (भुसाराङ्ग) पूजासँगै झण्डोत्तोलन गरिएको हो ।
तत्कालीन मल्ल राजा भूपतीन्द्र मल्लले बनाउन लगाएको ङातापोल नेपाल संवत् ८२२ असार शुक्ल प्रतिपदामा निर्माण पूरा भएको अभिलेख छ । उक्त अभिलेखमा मन्दिर निर्माण पूरा भएको असार शुक्ल प्रतिपदाका दिन पहिलो वर्ष बन्धन पूजा गरेकोसमेत उल्लेख छ ।
मन्दिरको सरसफाइ र मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यले राजा भूपतीन्द्र मल्लले वर्सेनि वर्ष बन्धन पूजाको परम्परा बसाएको संस्कृतिविद् ओमप्रसाद धौभडेल बताउँछन् । सोही परम्पराअनुसार प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल प्रतिपदाका दिन ङातापोलको वर्षबन्धन पूजा नियमित रुपमा चल्दै आएको छ ।
भक्तपुर तलेजुका जोशी, कर्माचार्य, राजोपाध्याय र ताल्चाभँडेल जातका पुजारीहरुले तान्त्रिक विधिअनुसार ङातापोल मन्दिरभित्र रहेकी सिद्धि लक्ष्मी देवीको पूजासँगै मन्दिरको वर्ष बन्धन पूजा गरिएको छ । उक्त पूजाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गुठी संस्थानबाट हुँदै आएको छ । मन्दिरका पुजारी यज्ञमान कर्माचार्यले मन्दिरमा वर्षबन्धन पूजामा मात्रै बलि पूजा हुने जानकारी दिए ।
उक्त पूजासँगै भक्तपुर नपा ६ तुछिमला निवासी अवालहरुले मन्दिरको गजुरमा झण्डोत्तोलन गरेका छन् । जसअनुसार यसवर्ष पनि तुछिमला टोलसुधार समितिका अध्यक्ष हरिशरण अवालको नेतृत्वमा सवा दुई मिटर सेतो कपडामा रातो कपडाको अर्धचन्द्र अंकित ध्वजा फहराइएको हो ।
अति अग्लो पाँचतले मन्दिरमा गएर ध्वजा फहराउनु अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले गुठी संस्थानले पहिलेदेखि नै घर निर्माणमा डकर्मीको काम गर्दै आएका साहसी अवाल जातिहरुलाई उक्त काम गर्ने जिम्मा दिँदै आएको छ । यस वर्ष झण्डोत्तोलन गरेका अवालहरुलाई गुठी संस्थानले १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । गएको वर्ष गुठी संस्थानले कम रकम दिएको विरोधस्वरुप मन्दिरको पहिलो तलाको छानामै झण्डोत्तोलन गरिएको थियो । गत वर्ष गुठी संस्थानले जम्मा चार हजार रुपैयाँमात्रै उपलब्ध गराएको थियो ।
मन्दिरका पाँच तलामध्ये दुई तलासम्म मन्दिरभित्रबाटै माथि जान सकिन्छ तर गजुरमा पुग्न मन्दिरका बाँकी तीन तला चढ्न बाहिर छानामा आउनुपर्छ । त्यसको लागि मन्दिरको पछाडितिरको छानामा प्वालको व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले मन्दिरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा सामान्य क्षति पु¥याएको छ । तैपनि सुरक्षित साथ झण्डोत्तोलन गरिएको मन्दिरका पुजारी कर्माचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भूकम्पले क्षति पु¥याएको मन्दिरको माथिल्लो तलाको मर्मतको लागि भक्तपुर नपाले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । भक्तपुर नपाको जारी पाँचौं नगरसभाले ङातापोल मन्दिर जीर्णोद्धारको लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
ङातापोल मन्दिरमा ध्वजा फहराएपछि बोकाको बलि दिएर वर्षबन्धन पूजा गर्दा राज्यबाट विघ्न बाधा हट्ने जनविश्वास रहेको भक्तपुर तलेजुका मूल नाइके नरेन्द्रप्रसाद जोशी बताउँछन् । ङातापोल मन्दिर भक्तपुर तलेजुकै एक भाग हो । तलेजुका मूल नाइकेको सिफारिसमा ङातापोलका पुजारी नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वि.सं १९९० सालको भूकम्पमा सबैभन्दा माथिको एकतलामात्रै भत्केको ङातापोल मन्दिरको भक्तपुर नगरपालिकाले २०५५ सालमा पूर्ण रुपमा जीर्णोद्धार गरेको थियो ।
भक्तपुर । भक्तपुर–काठमाडौं ६ लेन सडकको मध्यपुर थिमी नगरपालिका ४ राधेराधेमा गए राती टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । टिपरका चालक घटनालगत्तै फरार भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ ।
नयाँ ठिमीबाट भक्तपुरतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख ५३४३ नम्बरको टिपरले सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको प्रदेश ३–०२–००६ प ४९९४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक सोलुखुम्बु जिल्लाको पञ्चन ९ घर भएका २८ वर्षीय प्रेमबहादुर राईको मृत्यु भएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
टिपरको ठक्करबाट घाइते राईलाई उपचारको लागि नजिकैको मध्यपुर अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा उपचारकै क्रममा आइतबार उनको मृत्यु भएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दुवै सवारीसाधन महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुरको नियन्त्रणमा राखिएको छ । फरार टिपरका चालकको खोजतलास तीव्र बनाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
दुर्घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
भक्तपुर । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले आइतबार घाटी रेटेर महिलाको हत्या गरेको आशंकामा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
आइतबार बिहान भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ७ वागेश्वरीको बाँसबारीमा एक महिलाको घाटी रेटेर हत्या भएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र पछाडि कान्छा ज्वाइँ सोनाम थापामगरको एकतले घरमा बस्ने सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँ घर भएकी अन्दाजी ६० वर्षीया सावित्री भट्टराईको अपरचित व्यक्तिहरुले घाटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
भक्तपुर प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलका अनुसार धारिलो हतियार प्रहारलगत्तै भट्टराईको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटना घटाएको आशंकामा पक्राउ गरिएकाबारे भक्तपुर प्रहरीले पूर्ण जानकारी दिएको छैन ।
‘शंकाको आधारमा एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौं’, प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ । उनी दोषी पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ ।’
उक्त घटनाबारे खबर प्राप्त हुनासाथ परिसरबाट प्रहरी टोली खटी गई प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शव पोष्टमार्टमको लागि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार भट्टराई कान्छी छोरी र ज्वाइँसँगै भक्तपुरमा बस्दै आएकी थिइन् । चार छोरीकी आमा भट्टराईका छोरी ज्वाइँले बाँसबारीमा नयाँ घर बनाइरहेका छन् । उक्त घरमै उक्त घटना भएको देखिएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
‘घटना हुँदा भट्टराई एक्लै रहेको भेटियो’, प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले भने, ‘छोरी र ज्वाइँ आआफ्नो कामले काठमाडौं गएको मौका पारी हत्या गरिएको देखिन्छ ।’
इन डेफ्ट मासिक, पुस २०७५ को सम्पादकीय देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय...
भक्तपुर नपाको बजेट १ अर्ब ७३ करोड
भक्तपुर भक्तपुरकै जेठो भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि एक अर्ब ७३ करोड ४० लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत...
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ भक्तपुरको अध्यक्षमा भुसाल
SPECIAL2 weeks ago
भक्तपुरका सम्पदा मर्मत गर्न नियमित घुम्ती टोली
Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073 | Design & Host By SITEMANDU